धनुषा : हँसपुरकी उपमेयरले ताला खोलेपछि मेयरले लगाए यस्तो आरोप !
अदालतको निर्णयपछि मात्र नगरपालिकाको कार्यालय बारे टुँगो लाग्ने जनाइएको छ ।
२९ श्रावण, २०७६ || प्रकाशित १५:३४:००
न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । विगत एक महिनादेखि नगरपालिकाको कार्यालयमा लगाइएको ताला बुधबार खोलिएको छ ।
यता, नगरका मेयर राम ज्ञान मण्डलले उपमेयरले ताला खोलेर ३ कर्मचारी सहित आफू गरी ४ जना मात्र भित्र बसेर आफ्नो पक्षधरको कार्य मात्र गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । आफू कार्य विशेषले जनकपुर रहेको मौका छोपी उपमेयरले ताला खोलेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखा अधिकृत, योजना शाखा सहित उपमेयर मात्र बसेर कार्य सँचालन गरेको आरोप लगाएका छन् । न्यूज ब्यूरोसँग कुराकानी गर्दै मेयर मण्डलले उपभोक्ता समिति मार्फत काम गरेका उपभोक्ता समितिलाई समेत चेक नकाटी आफ्नो पक्ष हिसाबले मात्र चेक काटने गरेको बताए ।
सो क्रममा मेयर मण्डलले ४ जना बाहेक अन्य जनालाई कार्यालय भित्र प्रवेश नदिएको आरोप समेत लगाएका छन् । कर्मचारी दलकै कम्प्युटर अपरेटरलाई समेत प्रवेश नदिएको तथा ढोका थुनेर अधिकृत सहित उपमेयर बसेर कार्य गरेको आरोप उनले लगाए । उनले भने, - "अन्य कोहीलाई पनि प्रवेश गर्न दिएको छैन, उपमेयर आफ्नो केबिनमा बस्ने हो नी ? कि बसेर चेक काटने ? कर्मचारी आफ्नो काम गरिहाल्छ नी ? एकै ठाउँमा बसेर आफ्नो पक्षका व्यक्तिहरुको, उपभोक्ता समितिहरु जसले काम गरेको छ उसको चेक मात्र काटिरहेको छ ।"
यता, नगरकी उपमेयर रेणु झाले मेयरको आरोपलाई निराधार बताएकी छन् । न्यूज ब्यूरोसँगको कुराकानीको क्रममा उपमेयर झाले मेयर मण्डलले लगाएको आरोपलाई खण्डन गर्दै आफू पत्रकार, अधिकारकर्मी, स्थानीय, कर्मचारीहरुको रोहबरमै ताला खोलेर कार्य सँचालन गरेको बताइन् । अन्य कर्मचारीलाई प्रवेश नदिएको सन्दर्भमा बोल्दै उपमेयर झाले आफू कसैलाई प्रतिवन्ध नगरेको दाबी गरिन् । मेयरको सबै आरोपलाई निराधार र झुठो बताउँदै उनले नगरपालिकाको कार्य विधिवत रुपमा निर्वाध सँचालन भएको बताइन् ।